Showing १२१-१३० of ९५३ items.
भारतीय मिडियाको वास्तविकता
भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रेस उद्योग भएको राष्ट्र हो । भारतमा १७ हजार न्युजपेपर, १ लाख म्यागजिन र ४ सय ३ भन्दा बढी स्याटेलाइट न्युज च्यानल, अनगिन्ती वेबसाइट, असङ्ख्य फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलहरूले खबर सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन् । पछिल्लो केही समयमा भारतीय मिडियाजगत् विश्वमा नै निकै आलोचित भएको छ र क्रमशः आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । आरएसएफले वल्र्ड प्रेस फ्रिडम इण्डेक्समा भारतलाई १४२ औं स्थान दिएको छ भने नेपाल ११३ र छिमेकी राष्ट्रहरू पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का क्रमशः १४५, १५१ र १२७ औं स्थानमा रहेका छन् । भारतमा प्रेस स्वतन्त्रताभारतमा केही प्रेसजगत्का ठूला र स्वतन्त्र विचारक
प्रकाशित मितिः असार ३१, २०७७
कोभिड–१९ को कहर र अबको बाटो
कोरोनाको कहरले हामी सबैको दैनिकी परिवर्तन भएको छ । लकडाउनले हाम्रा पेशा, व्यवसाय, काम र आयआर्जनमा गम्भीर असर पारेको छ । तर सबैमा एकनासको प्रभाव भने छैन । सबैभन्दा धेरै मर्कामा शहरमा असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी काम गरेर छाक टार्ने, परिवारको गुजारा गर्ने मानिस एकदमै सङ्कटमा परेका छन् । त्यसपछि शहरमै बसेर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने र गुजारा गर्नेहरू परेका छन् । माथिका दुई समूहलाई बढीमा १५ दिन बिनाकाम, बिना आम्दानी गुजार्नु पर्दा भोकभोकै हुने अवस्था छ । त्यसपछि मासिक बेतनभोगी तर सानो उद्योग व्यवसायमा भएकाहरूले पहिलो महिना सजिलै गुजारे र दोस्रो महिनादेखि समस्या देखिन थालेको छ । तिनको रोजगा
विकास र समृद्धिका कुरा
कोभिड–१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्यसहित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायत सबै पेशा व्यवसाय तहस–नहस भएको छ । मृत्यु र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको छ । लकडाउन खुकुलो भए पनि यातायात, शिक्षा र होटल, रेष्टुरेण्टलगायत पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । आयात, निर्यात तथा उत्पादन पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएको छ । लकडाउन खुले पनि देशभित्र शिक्षा, यतायात र होटल क्षेत्रका २५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू बेरोजगार भएका छन् । ९० लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखांै नेपालीहरू रोजगारी गुमाएर घर फर्कंदैछन् । वैदेश
प्रथम महिला उपसभामुखको सम्झनामा
वेणु काफ्ले विषय प्रारम्भआर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट विश्वको वातावरण नियाल्दा एउटा भयावह दृश्य आँखा अगाडि अटाई नअटाई नाच्न थाल्छन् । यो पीडाबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले नेपाली जनमानसमा धेरै प्रकारका परिवर्तनहरु आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । आर्थिक रुपले विकासोन्मुख अवस्थामा रहेको राज्य विकासका गतिलाई अझ धिमा गतिमा अगाडि बढाउन बाध्य बन्दै गएको छ । हाम्रो देश राजनैतिक रुपमा गणतान्त्रिक मुलुक बनिसकेको वर्तमान परिवेशमा लीला दिदीले नेतृत्व गरेको पार्टी आज सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकार झण्डै दुइ तिहाइ नजिक छ ।जनतालाई देखाएका
प्रकाशित मितिः असार २७, २०७७
४९० पटक पढिएको
जनसङ्ख्या भनेको कुनै निश्चित स्थानमा निश्चित समयमा रहेका मानिसहरूको कुल सङ्ख्या हो । विश्वको जनसङ्ख्या पाँच अर्ब पुगेको दिन सन् १९८७ जुलाई ११ तारिखलाई मानिन्छ । त्यही दिनबाट प्रेरित भएर विश्व बैङ्कको माथिल्लो तहको डेमोग्राफर डा. के. आर. जचरियाहले विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । उनको उक्त प्रस्तावपछि सन् १९८९ सालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रममा सरकारी परिषद्ले विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयपछि प्रत्येक वर्ष जुलाई ११ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यो दिवस पारिवारिक योजना, लैङ्गिक समानता, गरिबी, मातृ स्वास्थ्य र मानव अधिकारको महत्व आदिका बार
४५९ पटक पढिएको
अहिलेको इटहरी र इटहरी काव्य पुरस्कार
इटहरीको वास्तविकताअहिलेको इटहरी अब पहिलेको जस्तो रहेन । अहिलको इटहरी धेरै सुखभोग गर्दै छ । अहिलेको इटहरी ठूलो सोच भएको फराकिलो र फरासिलो छ । यसको भूगोल बढेर आँकी नसक्नु भएको छ । पुरानो इटहरीसहित हाँसपोसा, खनार, एकम्बा र पकली जस्ता अस्तित्व बोकेका ठूला हस्तीयुक्त बस्तीहरु समाहित भएका छन् । तसर्थ अहिलेको इटहरी तराईको विशाल भू–भाग ओगटेको जानी नसकनु बुझी नसक्नुको भएको छ । इटहरी थारु समुदायका मान्छेले आवादीको श्री गणेश गरेको ठाउँ हो । इटहरीको माटोमा थारुहरुको श्रम छ । यहाँको माटोमा उनीहरुको इतिहास छ । यहाँका खेतका गरा–गरामा थारु समुदायको श्रम र सीप छ । तसर्थ, इटहरीलाई बसोबासयोग्य, उब्ज
नेपाली राष्ट्रियताका आयामहरू
राजेन्द्र किराती विषय प्रवेशःभारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि देशभक्त नेपाली जनताहरू आन्दोलित भए । यही आन्दोलन र दबावसँगै नेपालले लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका भू–भागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । यो ऐतिहासिक कार्यको सबैले सराहना र समर्थन गरेका छन् । यसले भारत विरोधी भावना मात्र उत्कर्षमा पु¥याएको छैन, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत विभिन्न स्थानहरूको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू खोतल्न बाध्य पारेको छ । सिङ्गो नेपाल–भारत बीचको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानको ब्रम्हास्त्र खोजिरहेको छ । यो औसत आवत–जावत गर्ने सडकमार्
२८१ पटक पढिएको
यसरी हुन सक्छ कृषि क्रान्ति
नरेन्द्र बस्नेत कोभिड–१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्यसहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत सबै पेशा व्यवसाय तहस–नहस भएको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ र ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन् । लकडाउनको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि नराम्रो गरी परेको छ । कृषि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । लकडाउनसँगै किसानहरूले अर्बाैं रुपैयाँ घाटा व्यहोरेका छन् । सरकारले कृषिको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा तत्काल राहत घोषणा गर्नुपर्छ । सरकारले साना किसानहरूलाई नगद सहयोग, मल, बिउ र सिंचाइमा
कम्युनिष्ट पार्टी, भौतिकवाद र पुँजीवादी विकास मोडेल
पारस काङ्माङ राई कम्युनिष्ट र कम्युनिष्ट पार्टीहरू भौतिकवादलाई विश्वास गर्छन्, आध्यात्मिकवादलाई होइन । माक्र्सवाद भौतिकवादी द्वन्द्ववादी विज्ञानसम्मत दर्शनशास्त्र हो । काल्पनिक, नदेखेको, नभोगेको स्वर्ग, नर्क, पाप–पुण्य, धर्म, अधर्म, ईश्वरीय अवतारको विश्वास गर्दैन । नेपाली समाजमा ईश्वरीय अवतारको प्रभाव त छँदैछ । तर नेपाली समाजको आध्यात्मिक चिन्तन, चेतनाको अभावको परिणाम हो भने विकसित राष्ट्रहरूले अपनाएको आध्यात्मिक चिन्तन चेतनाले नै उजागर गरेको र राजनीतिलाई आफ्नो कावुमा राख्नु हो । जब कम्युनिष्टहरू जीवनमा ईश्वरलाई आदर्श मान्न पुग्दछन, तब उनीहरूले माक्र्सवाद÷भौतिकवादको प्रशिक्षित आद
प्रकाशित मितिः असार २३, २०७७
३८० पटक पढिएको
आदिवासी जनजाति सूचीः इतिहास र यसको राजनीतिकरण
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’ कानुनी रुपमा हेर्दा विसं २०४७’ ले नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग वर्ग आदिको अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले नै सर्व प्रथम नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी पहिलोपटक स्वीकार गरेको थियो । तापनि विसं २०४७ को संविधानमा धर्म निरपेक्षता, मान्छेको बाँच्न पाउने हक, आवासको हक, खाद्यानको हक, निःशुल्क स्वास्थ्यको हक, निशुल्क शिक्षाको हक, समानुपातिक समावेशी, मौलिक हक आदिलाई उल्लेख गरेको थिएन । त्यस्तै राष्ट्रिय जनावर पनि ‘गाई !’ नै राखिएको थियो